Dhaqaaleyahan faallo ka bixisay miisaaniyadda dawladda ee sannadkan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqaaleyahan faallo ka bixisay miisaaniyadda dawladda ee sannadkan
La daabacay onsdag 18 september 2013 kl 14.56
Waa mid caadiyan u dhacda in hoowlo dhiiri-gelin dhaqaale lagu wajaho dhaqaalaha reeraha xilli uu caalamku ku sugan yahay xaalad dhaqaale ee hooseeysa, sida uu sheegay Anders Borg, ahna wasiirka dhaqaalaha ee dalka Iswiidhen, mar uu saaka soo bandhigayey miisaaniyadda dhaqaalaha ee sannadka 2014
Hase yeeshee maal-gelinta loo duwi karey hab kale, sida ay sheegtay madaxa laanta dhaqaalaha ee bangiga Nordea Annika Winsth. Waxayna intaa raacisay in saadaalinta dawladda ee kobaca dhaqaaluhu yahay mid kheyr sheege iyo rajo ku fadhiya:
- Qiyaastaydu waxay tahay in saadaalinta dawladda ee kobaca dhaqaale ee sannadkan eynu ku jirno uu ku dhisan yahay rajo. Waxaannu soo ban-dhigney saadaalin lagu dhimeyo kobaca dhaqaale oo aanay dawladdu miisaaniyaddeeda sannadka foodda innagu soo haya ku soo ban-dhigin. Natiijada ayaa marka noqoneeysa inaan la gaarin saadaalinta ah koboc-dhaqaale oo gaarsiisan 1% sannadkan. Iyada oo sidoo kale sannadaha soo socdana ay dawladda saadaalinteedu ku dhisan yihiin rajo un, mar haddii la heysto saadaalin koboc-dhaqaale oo ka sarreeya xaqiiqdu sida ay tahay.
Saadaalinta rajada wanaag-san ayaa ku wanaag-san xilli ay doorashadii awoodda ka har-san tahay sannad, sida ay sheegtay Annika Winsth, dhanka kale waa mid aad uga gadmeeysa bulshada in lacag dheeriya jeebabkooda ey ku soo harto. Halka uu wasiirka dhaqaalaha Anders Borg aamin-san yahay inay tahay xilli loo baahan yahay in tallaabooyinkan la qaado, kol haddii aaney shirkaduhu horey u riixi karin kobaca dhaqaale ee dalka iyo in la adkeeyo dhaqaalaha bulshada iyo sidii loo adkeeyn lahaa fal-iibsigooda oo dardar gelinaysa kobaca dhaqaale ee dalka. Hase yeeshee ay Annika Winsth ku macneeysay dhowr sababood miisaaniyaddan ay dawladdu soo ban-dhigtay:
- Mid muhiimad ku fadhida waxay tahay xaaladda dhaqaalaha hooseeya ee lagu sugan yahey iyada oo dhanka kale la guda galey xilli doorasho. Sidaa daraadeedna hoowlahan loogu wajahey bulshada. Waxaan qabnaa iay wanaag-san tahay in dawladdu dhiiri-geliso, isla markaana loo baahnaa inay horay tallaabooyin noocaasiya ay ugu tallaabsato. Waxaase shaki ka jiraa inay tahay dhaqaalaha bulshada jeebabkooda gala midda u baahan in la dhiiri-geliyo.
Maya, waxaa jira arrimmo kale ee u baahan lahaa in dawladdu miisaaniyad geliso, sida ay sheegtay Annika Winsth:
- Mid waxaa weeye in la abuuro xeerar ama habab hagaya in dhaqaalaha Iswiidhen ee mustaqbalka dheer sidii uu hab-sami ugu howl-geli lahaa. Dhibaato ayaa naga heysata dhanka suuqa hooyga tusaale ahaan, waana mid loo baahan yahay in si habboon looga fekero iyo sidii loo dhisi lahaa guryo hor leh. Waxay middaasi sidoo kale culeeyska ka qaadi lahayd bangiga qaranka oo xoogga saaray xaaladda deeymaha bulshada ee deegaannada.
Haa, waxaa wax ku ool u noqon lahaa guryo laga dhiso magaalooyinka waaweyn, kuwaasi oo hor-u-marin u horseedi lahaa kobaca dhaqaale ee dalka, halka dhanka kale ay tallaabadaasi hoos u dhigi lahayd qiimaha guryaha. Middaasi ayaa dhankeeda wax ku ool ugu noqon lahayd in aannu bangiga qaranku kor u qaadin ribada iyo sidii looga hor-tegi lahaa xumbada kala iibsiga guryaha. Ribada hooseeysaana waa mid saameeyn wanaag-san ku yeelata shirkadaha xilliga lagu jiro dhaqaale tabar-daran.
Dawladda ayaa aamin-san iney abuuri doonto 13 000 goobo hor leh ee shaqo tallaabooyinka miisaaniyadda ee lagu dhimeyo khidmadda mushaarooyinka iyo midda kor loogu qaadeyo saqafka mushaarooyinka ey waajibka tahay iney bixiyaan khidmadda-dawliga ah, balse ay middaa tuhun ka qabto Annika Winsth:
- Waa su'aal adag in jawaab dhab ah laga bixiyo. Haddii aan qalbadayda ka hadlo waxaan oran lahaa waa tiro la buunbuuniyay. Khidmad dhimista ayaa howlo badan abuurtay kolkii ugu horeeysay ee lagu tallaabsadey. Hase yeeshee aan amin-sanahay in xawligeedii uu yaraaday.